Ny Fair Canton faha-125 - XiaMen Flyone Bags Co., Ltd
Natomboka ny 31 aprily ka hatramin’ny 04 mey 2019 ny Foara Canton faha-125, ny dingana fahatelo.Tafiditra tao anatin’izany ny kitapo sy entana, akanjo, vokatra kiraro......Miisa 200 000 mahery ireo mpividy maneran-tany nanatrika ny foara canton.
Faha-5 ho an'ny kitapo Flyone nanatrika ny tsenan'i Canton, amin'ny maha orinasa mpanamboatra kitapo matihanina, izahay no tena mampiseho ny foto-kevitra famolavolana vaovao sy serivisy matihanina.Ny vokatray dia nahitana ny kitapo diaper, kitapo soroka, pad fanovana, kitapo solosaina finday ary kitapo ho an'ny ankizy.Izy rehetra dia miaraka amin'ny endrika vaovao.Tsy ny vokatra ihany no asehontsika, fa ny hevitra famolavolana vaovao.
Ankoatra ny vokatra kitapo famolavolana vaovao, manana ekipa matihanina ihany koa izahay amin'ny fampirantiana, efa voaofana matihanina izy ireo, hampiditra ny famelabelaran'ny orinasanay sy ny foto-kevitry ny famolavolana vaovao amin'ny mpitsidika anay.mahazo fankasitrahana tena tsara foana izahay aorian'ny fampirantiana.
Noho ny vokatra famolavolana vaovao sy miaraka amin'ny serivisy ekipa matihanina, ny trano heva dia misy fifamoivoizana an-tongotra foana, ny ankamaroan'ny mpanjifa dia afaka mahita ny vokatra kitapo liana avy amin'ny trano heva.ary afaka mifanakalo hevitra sy mivoatra miaraka amin'ny karazana hevitra famolavolana vaovao rehetra, ary afaka mahazo ny tsena miaraka.
Raha matihanina ianao dia hahazo fankatoavana, rehefa nahazo fankatoavana ianao dia hahazo ny baiko.Ny baiko amin'ny fampirantianay no fanohanana tsara indrindra ho an'ny ekipanay.